I-Brazing Copper Tubing ne-Induction Brazing System
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / I-Brazing Tubing yethusi nge-Induction
I-Brazing Copper Tubing nge-Induction
Isigaba: Induction Brazing Tags: ukubheja ithusi, ukubheja ipayipi yethusi, ukubhoboza ithubhu yethusi, i-brazing tubing, thenga i-heater brazing heater, Thenga i-heater brazing heater, thenga i-RF brazer yethusi, lokungeniswa braring yethusi ishubhu, ipayipi yokubhanqa, amapayipi okubopha wokufaka, lokungeniswa brning ishubhu, intengo yethusi ye-brazer yethusi
Ukubonisa lokungeniswa braring yethusi ishubhu nesikhathi sokubopha usebenzisa uhlelo lwe-DW-UHF-10 kW kanye nekhoyili yelebhu yokuhlukanisa etholakalayo
Umshini wokubamba indali we-DW-UHF-10KW
• Ishubhu le-Copper - iSuction Tube
• Nameka unamathisele
Ukushisa: Cishe u-1500 ° F (815 ° C)
Isikhathi: 5 - 5.2 sec
Njengomhlangano owodwa kuphela owanikezwa isivivinyo, sabeka umthwalo wokuhlola sisebenzisa udonga olusindayo 5/16 ”ishubhu lethusi elakhiwa njenge-tube eyodwa lamukela elinye ekugcineni kwecala elivulekile. Isikhathi sokushisa salinganiselwa ngokusetshenziselwa upende we-tempilaque ukukhombisa amazinga okushisa. Umhlangano wokuhlola, (owalandelwa yizakhi ezinikeziwe) ubuthene ndawonye ngokuhlanganiswa kokunamathisela okungu-505 kokufakelwa kovalo futhi kufakwe kwelebhu yokuhlolwa kwezithombe ngalemifanekiso enamathiselwe) Umjikelezo wokushisa ongu-5 kuya ku-5.2 imizuzwana utholakale ukugeleza ku-alloy wenze ukuhlangana .
Njengoba kukhonjisiwe, imodeli ye-DW-UHF uhlelo lokungenisa impahla iyakwazi ukufudumeza zombili izhubhu ezinkulu nezincane kunazo zonke kwizigaba zeshubhu ukuqedela ilunga elinethusi. Izikhathi zokushisa zisebenzisa ikhoyili yokuhlola etholakalayo zingaphakathi kokulindelwe kwesikhathi sokushisa sokukhiqiza esidingwa yi-Electrolux.
I-HLQ izodinga ukuhlangana okuphelele ukuze kubuyekezwe ukuze kuthuthukiswe ukwakhiwa kokugcina kwekhoyili okungabamba wonke amalunga ayi-12 akhonjiswe esithombeni sakho sesakhiwo. Kuyadingeka ukwazi nokubona ukuvuleka phakathi kokuxhunywa kwamapayipi okuzobhangiswa kanye nengxenye yensimbi yokuqinisa ukuze kuqinisekiswe ukuthi indlu yensimbi ayithintwa yinkambu ye-RF eyakhiwe eyakhiwe kwikhoyili yomthwalo. Lo mklamo wokugcina ungadinga ukwengezwa kwezinto ze-ferrite kwikhoyili ezosebenza ukugxila enkambeni ye-RF ekuholeni kwethusi hhayi ezindlini zensimbi.
Ukuhlolwa kokuqala kwaqedwa ku-DW-UHF-10kW kusetshenziswa ikhoyili yamalebhu etholakalayo. Ikhoyili yokukhiqiza izofakwa ezindlini ezingekho esimeni esivumela opharetha ukuthi ayisebenzise ukuthola ikhoyili lapho ihlangana khona nezinsimbi zethusi ukuthola indawo yokushisa enembile nenhle yenqubo yokubopha. Idizayini yekhoyili yokukhiqiza izofaka imikhondo emifushane kunekhoyili yokuhlola futhi ilungiselelwe ukuthi imijikelezo yokushisa izothuthukiswa (izikhathi zokushisa ezimfushane).